रानीपोखरीदेखि सानेपासम्म फैलिएको टुँडिखेल कसरी खुम्चियो
निसासिएको सहरमा टुँडिखेल
दसैँको अष्टमीको दिन गणपतिलाल श्रेष्ठ र सञ्जय अधिकारी विभिन्न शक्तिपीठ घुम्न निस्के, ०७६ मा । दुईमाजुको दर्शन गरी भद्रकाली दर्शनका लागि उनीहरू वीर अस्पतालको बाटो भएर खुलामञ्च पसे । खुलामञ्चको छेउमा रहेको दुईमाजुको धार्मिक हिसाबले ठूलो महत्त्व छ । तलेजु भवानीलाई सिम्रौनगढबाट ल्याउँदा खट पहिले भक्तपुर हुँदै काठमाडौँ ल्याइयो । जहाँ–जहाँ खट राखियो, त्यहाँ–त्यहाँ शक्तिपीठ बनाइयो । तलेजुको पूजा दुईमाजुको पूजाबिना हुँदैन ।
तर अधिकारी र श्रेष्ठ खुलामञ्च पुग्दा स्थिति फरक थियो । ट्राफिक प्रहरीले खुलामञ्च पिच गर्ने भनेर सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । तर त्यहाँ कालो पिचको सट्टा ढलान मात्र गरिएको थियो । अधिकारी भन्छन्, “कालो पिच भनेको केही समयका लागि हो । तर ढलान गरेपछि त्यो सधैँका लागि हुन्छ ।”
ढलानको विरोध गरेपछि ट्राफिक प्रहरी र अभियन्ताबीच विवाद भयो । ट्राफिक प्रहरीलाई उनीहरूसँग केरकार गर्ने अधिकार नभएको भनेर अधिवक्तासमेत रहेका अधिकारीले प्रश्न गरेपछि दंगा प्रहरी बोलाइयो । यसपछि उनीहरूले पनि आफ्ना साथीभाइलाई फोन गरी खुलामञ्च बोलाए । केही बेरमै सम्पदा संरक्षणका अभियन्ता, संघीय सांसद भीमसेनदास प्रधान र उपमेयर हरिप्रभा खड्गी घटनास्थल पुगे ।
मेयर विद्यासुन्दर शाक्य भने डेंगु संक्रमित भएकाले अस्पतालमा थिए । महानगरले पनि ढलान गर्न नभनेको दाबी गरे । निर्माण पक्षले ढलान नरोक्ने बताएपछि अभियन्ताहरू ढलानमाथि उफ्रिए । त्यसपछि प्रहरीले ठेलठाल गर्न खोज्यो । अधिकारी सुनाउँछन्, “हामी ढलानमाथि थचक्क बस्यौँ । त्यसपछि गाडी पनि त्यसैमाथि गुड्न थाल्यो । अन्तत: ढलान रोकियो । प्रहरीले त्यहाँ बनाइरहेको संरचना हटायो ।”
अधिकारीका अनुसार दशमीको दिन राती पुन: ढलान भयो । चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गर्न लागेकाले काठमाडौँमा धुलो नउडोस् र सफाइ होस् भन्नकै लागि ढलान गरेको महानगरले बतायो ।
इतिहासविद्का अनुसार कुनै बेला टुँडिखेल रानीपोखरीदेखि सानेपासम्म फैलिएको २ माइलको थियो । राणाकालीन समयमै पनि टुँडिखेल एसियाकै परेड खेल्ने चउरका रूपमा चर्चित थियो । हालको टुँडिखेलको स्वरूप रानीपोखरीदेखि रंगशालासम्मको हो । यति ठूलो टुँडिखेल अतिक्रमित हुँदै अहिलेको स्वरूपमा आएको छ । टुँडिखेल जोगाउन के गर्ने ? यही सोचले अधिकारीलगायत अभियन्ताले सोचे र अन्तत: अकुपाई टुँडिखेलको योजना अघि सर्‍यो ।
विश्व स्वतन्त्रता दिवस (नोभेम्बर ९) को अवसर पारेर पहिलो कार्यक्रम भयो, मानवसाङ्लोद्वारा टुँडिखेल घेराउ । वालस्ट्रिट अकुपाईकै अवधारणालाई केही हदसम्म सोचेर अकुपाई टुँडिखेल सुरु गरेको अधिकारी बताउँछन् । तर उनको विचार अकुपाई टुँडिखेल एउटा अभियान हो, जसलाई नेपालीकरण गरी मुक्त टुँडिखेल भनिएको छ । यही अभियानबाट अभिप्रेरित भएर इलाम, पाल्पादेखि साथीहरूले फोन गरेर त्यहाँका टुँडिखेल जोगाउन अभियान थालेको उनी सुनाउँछन् ।
नेपालको संविधानको धारा ४८ (घ) को नागरिकको कर्तव्यअन्तर्गत ‘सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु’ उल्लेख छ । यस्तै, धारा ३२ मा भाषा र संस्कृतिको अधिकार छ । यसअन्तर्गत नागरिकले मातृभाषा र संस्कृति बोल्न र मान्न पाउने अधिकार छ । यही अधिकारको उपयोग गर्दै अहिले अभियन्ताहरू प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
भेला हुने ठाउँ
हरेक क्षेत्रका मानिस भेला हुने ठाउँ थियो, टुँडिखेल । र, अहिलेसम्म यो परम्परा कायमै छ । चाहे विरोधसभा होस् या सांस्कृतिक कार्यक्रम या कन्सर्ट । सबै टुँडिखेल नै आउँछन् । घाम ताप्न, बदाम खान, फुर्सदमा बात मार्न, फुटबल खेल्न मात्र होइन, सेनाले परेड खेल्ने ठाउँ पनि हो, टुँडिखेल । सम्पदाविद् सुदर्शनराज तिवारीका अनुसार लिच्छविकालदेखि अहिलेसम्म टुँडिखेल राजनीतिक र सांस्कृतिक चहलपहल गर्ने ठाउँको रूपमा चर्चित छ ।
वातावरणविद्का अनुसार जहाँ सबैभन्दा बढी प्रदूषण हुन्छ, त्यहाँ प्रदूषणको मात्रा घटाउन खुला ठाउँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । रत्नपार्क काठमाडौँको सबैभन्दा प्रदूषित स्थानमा पर्ने एक तथ्यांकमा देखिएको छ । अहिले केही ठाउँ खुला हुँदा प्रदूषण यसरी बढेको छ भने खुला ठाउँ नै नहुँदा अवस्था के होला ? यसको पनि उत्तर बनेको छ, अकुपाई टुँडिखेल ।
टुँडिखेलमा एउटा बूढो रूख बीचमा उभिएको छ । त्यो रूख गुरुमापाको हो । गुरुमापा खासमा राक्षस हो । होलीको दिनमा त्यहाँ पूजाआजा गरिन्छ । नेवा:. संस्कृतिअनुसार पाँहाचरेको बेला गुरुमापालाई राती भोज लगेर खुवाइन्छ । ०१८ मा राजा महेन्द्रलाई कालो झन्डा देखाएपछि सार्वजनिक प्रतिरोध–स्थलको रूपमा उक्त रूख चिनिन थाल्यो । पञ्चायतमा त्यो रूख काटियो । दासप्रथा, सतीप्रथा उन्मूलन गर्न होस् वा नब्बे सालको भूकम्पमा राहत बाँड्न, सोही रूखबाट घोषणा गरिएको इतिहासविद् बताउँछन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका पति मदन भण्डारीले त्यही खुलामञ्चबाट कैयौँ पटक भाषण गरे, तत्कालीन सरकारविरुद्ध आक्रोश पोखे । अहिलेका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, नेताहरू र स्थानीय सरकार टुँडिखेल बचाउन सक्रिय हुनुपर्ने कि नपर्ने ? अभियन्ताहरूको प्रश्न छ । जनप्रतिनिधिलाई दायित्वबोध गराउन रूख रोप्ने, सम्पदाका साथीहरू, खेलाडीहरू, साहित्यकार र कलाकारसमेत खुलामञ्चमा पेन्टिङ गर्न पुगेका थिए ।
१८ कात्तिक ०२३ सालमा ब्रिगेडियर जनरल चन्द्रबहादुर थापाले जुद्धसडकमा रहेको भूगोलपार्कलाई नगर पञ्चायतले मिच्न खोज्दा मुद्दा हालेर सो पार्क बचाएका थिए । यस्तै, लोकविक्रम थापाले ०५३ मा साविक कलंकी गाउँ विकास समितिअन्तर्गत कित्ता नं २६४ मा २० रोपनी ४ आना २ पैसा रहेको सार्वजनिक गौचरन सरकारले मिचेकामा मुद्दा दायर गरेका थिए । गोरखापत्र, मालपोत कार्यालय र मन्दिर बनाउन सरकारले ३ भागमा सो जग्गा विभक्त गरी त्यहाँका रूख काटी वातावरणीय क्षति गरेको भन्दै परेको मुद्दामाथि १७ पुस ०५८ मा सुनुवाइ हुँदा त्यहाँ सम्पूर्ण काम–कारबाही बदर हुने निर्णय भयो । यसमा नेपाल सरकार ट्रस्टी मात्र हो, सर्वेसर्वा होइन भन्ने उल्लेख थियो ।
सहरी योजनाकार पद्मसुन्दर जोशीका अनुसार अकुपाई टुँडिखेल अभियान ढिलो सुरु भएको छ । “यो पहिल्यै सुरु हुनुपथ्र्यो । औपचारिक पक्षबाट यसको अतिक्रमण हुनु दु:खदायी छ । यस्तो अभियानमा सबै नागरिक सहभागी नहुनु अर्को साझा दुखान्त हो,” उनी भन्छन्, “मैले यति नगर्दैमा के बिग्रिन्छ र भन्ने सोचाइ गलत हो । टुँडिखेल सबैको हो र यसमा सबैको साथ आवश्यक छ ।”
जोशीका अनुसार अतिक्रमणले टुँडिखेल साँघुरिँदै गएको छ । लगनखेल, जाउलाखेल, सानो गौचरनजस्ता सार्वजनिक ठाउँ अतिक्रमित हुँदै आएका छन् । नेवार संस्कृतिमा ख्य: भनेको खेल हो । यस्ता ख्य:मा देवाली गरिन्छ । प्राकृतिक आधार क्षेत्रमा देवाली गरिन्छ । तसर्थ पानी, चउरमा देवाली गरिन्छ । नेवारी समुदायको देवाली गर्ने ठाउँमा ढुंगा हुन्छ, देउता हुँदैन । बरु ढुंगालाई नै मिलाएर राखिएको हुन्छ । जोशी भन्छन्, “यसको अर्थ देवाली गर्ने क्षेत्र प्राकृतिक रूपमा संरक्षण गर्नुपर्छ । मन्दिर मात्र होइन, अन्य केही निर्माण गर्नु हुँदैन ।” यी चराचुरुंगी र मानिसले घना बस्तीबाट आउँदा स्वस्थ श्वास फेर्ने प्राकृतिक ठाउँ हुन् ।
जोशीका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा यस्ता ‘खेल’ अग्ला ठाउँमा छन् । खासमा तिनको काम पानी सञ्चय हो । अग्लो ठाउँको पानी सोसिएर तल्लो ठाउँमा पुग्छ, चाहे भूमिगत होस्, चाहे माथिबाट । भन्छन्, “टुँडिखेल अन्य क्षेत्रभन्दा माथि छ, हल्का भिरालो छ । अनि, सँगै रानीपोखरी छ, जहाँ पानी सञ्चय गरिन्छ । वरिपरि रहेको सुन्धारा, भोटाहिटीलगायतका ढुंगेधारा हेर्दा टुँडिखेल रिचार्ज क्षेत्र रहेको आँखा चिम्लेर भन्न सकिन्छ ।” टुँडिखेलमा २/४ फिट खनेर हेर्दा बालुवा भेटिन्छ, जसको अर्थ यो पानी रिचार्जकै लागि परापूर्वकालदेखि बनेको हो । त्यसको मुनि लेसिलो माटोले पानी जम्मा भएर बस्छ ।
छैन भूउपयोग योजना
सरकारसँग अहिलेसम्म भूउपयोग योजना छैन । पञ्चायतकालमै काठमाडौँमा घना बस्ती भयो भनेर भौतिक पूर्वाधार योजनाले रिपोर्टमा लेखेको विज्ञहरू बताउँछन् । जोशी भन्छन्, “भूउपयोग योजना हामीसँग छैन । कुनचाहिँ क्षेत्रमा मान्छे बस्ने, कुन क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्ने, कुन र कति क्षेत्र खेतीका लागि राख्ने र कुन क्षेत्र खुला छाड्ने भन्ने कुनै योजना छैन ।” यसका लागि भूउपयोग नक्सा हुनुपर्छ । विदेशमा घर कहाँ बनाउने, कत्रो बनाउने, झ्याल कत्रो बनाउने र रङ कस्तो लगाउने भनेर निश्चित मापदण्ड तोकिने उनको भनाइ छ ।
जोशीका अनुसार पञ्चायतकालमा प्रकाशचन्द्र लोहनीले भूउपयोग योजना बनाएर डोल क्षेत्र बन्न लाग्दा विवाद भएपछि रोकियो । त्यसपछि कसैले त्यस्तो आँट गरेका छैनन् । अहिले भूउपयोग नक्सा भनेर बनाइन्छ तर नक्सा भनेको जे छ, त्यही बनाउने हो ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवाली टुँडिखेल बनाउन गुरुयोजना बनेको सुनाउँछन् । यसका लागि बृहत् रानीपोखरी योजना बनाई अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । गुरुयोजनामा रानीपोखरीअन्तर्गत रहेको त्रिचन्द्र क्याम्पसलाई रानीपोखरीभित्रै मिसाएर, शान्तिवाटिका, रत्नपार्क र खुलामञ्चसहितको खुला स्थानको पार्क बनाउने योजना छ । सोहीअनुरूप रानीपोखरी निर्माण र त्यसभित्र रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माण भइरहेको छ । भन्छन्, “महानगरको सहरी योजना आयोगसँग मिली बृहत्तर रानीपोखरी बनाउने योजना छ, जहाँ भूमिगत पार्किङ व्यवस्थादेखि पार्क र पोखरी निर्माण हुनेछ ।”
काठमाडौँलाई व्यवस्थित सहर बनाउने जिम्मेवारी बोकेको छ, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले । तर स्थानीय सरकारले निरन्तर भाँजो हालेकाले कुनै काम हुन नसकेको प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीको दाबी छ । महानगरले भूकम्पलाई समेत ख्यालमा नराखी जथाभावी निर्माण गरेको र नियम बिगारेर भवन निर्माण विधि निकालेको उनको आरोप छ । भन्छन्, “आफू पदमा हुँदा सही र बाहिर निक्लेपछि सोही काम गलत हो भन्ने परम्पराले गाँजेको छ ।” तर महानगरलाई आरोप लगाउने काठमाडौँ उपत्यकाप्राधिकरणसँग पनि भूउपयोग योजना छैन ।
प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल भने खुलामञ्च कसैले कब्जा नगरेको जिकिर गर्छन् । भन्छन्, “महानगर पदाधिकारीको सर्वसहमतिमै वीर अस्पताल र दरबार हाइस्कुलको भवन निर्माण सामग्री राखेको हो । काम पूरा भएपछि हटाइन्छ ।” तर खुलामञ्चबाट ती सामान कहिले हट्ने भन्ने जवाफ उनीसँग छैन । भन्छन्, “कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेर हटाउने हो । उसको बैठक कहिले हुन्छ, मलाई थाहा छैन ।”
दुई साता पहिले खुलामञ्चमा रङ लगाउँदा पनि प्रहरी हस्तक्षेप गर्न आएको थियो । “सार्वजनिक सम्पत्ति भन्दैमा जसले, जे पनि गर्न पाउँदैन,” डंगोल भन्छन्, “महानगरसँग अनुमति लिनु पर्दैन ?” यस्तै, ८० प्रतिशत घर नगर विकासको मापदण्ड मिचेर बनाइएको उनको कथन छ । डंगोल थप्छन्, “जनताको इच्छाबमोजिम घर बनाउन मापदण्ड फेरिएको हो । तर मापदण्ड मिचेर बनिसकेका घरलाई भत्काउने जिम्मा नगर विकासको हो, हाम्रो होइन ।” समृद्ध सहरको परिचायक स्वच्छ हावापानी हो तर जथाभावी बनेका घर र खुला ठाउँको बढ्दो अतिक्रमणले नागरिक चिहानभट्टीमा जस्तो निसासिएर बाँच्ने कहिलेसम्म ?